Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbax balaadhan oo maanta lagu horqabtay Safaaradda gumaysiga ee Pretoria
Banaanbax balaadhan oo maanta lagu horqabtay Safaaradda gumaysiga ee Pretoria
Filimkii laga soo duubay banaabixii ay JOKA ku horqabteen Safaaradda gumaysiga.
Banaanbax balaadhan oo lagu qabtay magaalada Pretoria ayaa waxaa ka soo qayb galay dhamaan jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Koonfur Afrika bananbaxaa oo lagaga soo horjeeday dhiigyacab Meles Zinaawe. Waxaa dhaqan u ah shucuubta ku jirta gumaysiga Itobiya iyo kuwa uu
dulmiga ku hayo ee uu ku dulnool yahay inay ku banaabxaan markastoo uu cagaha soo dhigo meel ka mid ah caalamka iyadoo ay xusid mudan tahay jaaliyadaha S.Ogadeniya inay yihiin kuwa hormuudka u ah kacdoonka sii baahaya ee lagaga soo horjeedo KT Meles Zinawi.
Maanta oo Jimce ah ayaa waxaa lagu banaan baxay imaanshiyihiisa safaarada dalka Itobiya ay ku leedhaya magaalada Pretoria, halkaasoo saaka aroor hore ay ku waabariisteen safaarada horteeda dad badan oo banaanbaxaya oo ay aad shucuurtoodu u kacsanayd. Dadka banaanbaxay oo meela kala duwan isaga yimid ayaa waxay ka koobnaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhalinyarada, odayaasha, hooyooyinka, aqoonyahanada iyo Ururuka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeeniya OYSU.
Waxaa lagu akhriyay banaabaxa qoraalkii ay gudbinaysay jaaliyada Koonfurta Africa, taasoo ay saxaafadda ay aad u danaynayeen. Waxaana kasoo qayb galay saxaafado kala duwan oo u yimid goobta inay ogaadaan waxa ay tabanayaan banaanbaxayaasha.
Waxaa banaanka uga soo baxay safaarado badan oo ku yaalay aaga uu ka socday bananabuxu, safaaradahaasi ayaa intooda badan su’aalo waydiinayay banaanbaxayasha, kolkaasoo loo sheegayey in Ogadeniya ay ka jirto nooc walba oo ciqaab ah oo bani aadam lagu sameeyo. Waxaa ka mid ahayd dadkii sida lama filaanka ah ula kulantay banaanbaxayaasha gabadh Finland ah oo aad loo ilaalinayay oo arima badan weydiinaysay dadkii isugu soo baxay mudaaharaadka.
Ciidamadii amniga sugayay ayaa waxaa duubanayeen banaanbaxa oo ahaa mid si xamaasad leh loo gutay iyadoo la ilaalinayay wax ka baxsan anshaxa inay ka dhacaan goobta oo u soo jiidi kara sumcad xumo qadiyadda loo banaabaxayo. Waxay ciidamada police u mahad celiyeen dadkii banaabaxa ka soo qayb galay iyagoo ku tilmaamay inay ahaayeen dad leh hadaf oo ilaalinaya anshaxa iyo qaanuunka dalka ay amaanka u yihiin.
Banaanbaxani waa kii labaad ee ka dhaca intuu joogay South Africa dhiigyacab Meles Zinawi, waxaana loo balansan yahay mid sadexaad, kuna beegan 31ka bishan aan ku jiro, banaanbaxaas oy isugu iman doonaan dhamaan jaaliyadaha kala duwan ee Ethiopia iyo jaaliyada Somalida Ogadeniya.
Waxaa laga soo sheegay in safiiirka Ethiopia ee South Africa uu yidhi isagoo la hadlaya ku-xigeenkiisa sida ay ka soo wariyeen dad ka agdhow; “Qowmiyadihii Ethiopia way wada kacsan yihiine maxaan samaynaa? Sidee wax u jiraan ma wax aynaan ogayn ayaa soo kordhay?”
Safiirka waxaa u muuqda in ay israaceen oy isla banaabaxayeen dhamaan qawmiyadihii ka soo horjeeday Meles cabudhiska uu ku hayo qowmiyadaha iyo qawmiyadihii ku jiray gumaysiga caalamka ka dhamaaday. Waxaa ka mid ahaa safiirka hadaladiisii dadkeenu way fiicnaayeene dad khariban ayaa duufsanaya .. sidaana haday sii socoto wax aan la mahdinin ayaa ka dhalan kara.
Ugu dambayntii, banaabaxan wuxuu ahaa mid balaadhan oo si habsami ah loo soo abaabulay ayaan gadaal idinka daawadsiin doonaa filimkii laga soo duubay.